- Select Subcategory - Hero Plus HERO Postpaid U Premium & U Platinum Postpaid Service Tax Unlimited HERO P139 AddaLine,2Phones for 99sen Giler Unlimited GX68 Unlimited HERO P99 Giler GX50 Device Bundle with Unlimited HERO Postpaid Plan HERO Plus Postpaid Oppo Reno6 Pre-order
- Select Subcategory - Traveller SIM Pack Free Daily 1GB Productivity Internet for 24 hours Digital Week Campaign Value+ iPhone Promotion General Questions of Jaringan PRIHATIN Programme Jaringan Prihatin Programme Registration Jaringan Prihatin Programme - 2GB PRIHATIN Data Soalan Umum Program Jaringan Prihatin Kelayakan Program Jaringan PRIHATIN Pendaftaran Program Jaringan PRIHATIN Penebusan Subsidi Pelan Peranti Program Jaringan PRIHATIN 2GB Data Percuma Sejam Sehari Program Jaringan PRIHATIN Penamatan Program Jaringan PRIHATIN Kempen Pulangan Tunai U Mobile Untuk Tambah Nilai Selama Setahun Jaringan PRIHATIN Programme - Online Store RM0.99 Device Offer UMerdeka Prepaid Campaign 2021 Samsung Galaxy Z series Pre-Order Gimme Gimme Cash GoPayz GILER FLASH DEAL MALAYSIA DAY CAMPAIGN MCMC PERANTI KM40 MCMC FREE 1GB PER DAY Prepaid to Postpaid Value+ Android Promotion UM Biz Value+ Android Promotion FREE WiFi at PPR BIRTHDAY CAMPAIGN UM Biz Value+ iPhone Promotion CreditSOS Raya Campaign Jaringan Prihatin Programme Eligibility Jaringan Prihatin Programme - Redemption of Plan Subsidy Jaringan Prihatin Programme - Redemption of Device Package Subsidy Jaringan Prihatin Programme - Switching Plans & Providers Jaringan Prihatin Programme Termination Penebusan Subsidi Pelan Program Jaringan PRIHATIN Naik taraf Pelan & Bertukar ke U Mobile U Mobile’s Cash Back ForaYear Reload Campaign Stor Online Program Jaringan PRIHATIN PREPAID HIGH AND LOW RELOAD CAMPAIGN CreditSOS Merdeka Campaign MERDEKA GIFT SET CAMPAIGN UMerdeka Postpaid Campaign 2021 GILER FLASH DEAL 10.10 CAMPAIGN RM0 Phones
SelectaCategory Traveller SIM Pack Free Daily 1GB Productivity Internet for 24 hours Digital Week Campaign Value+ iPhone Promotion General Questions of Jaringan PRIHATIN Programme Jaringan Prihatin Programme Registration Jaringan Prihatin Programme - 2GB PRIHATIN Data Soalan Umum Program Jaringan Prihatin Kelayakan Program Jaringan PRIHATIN Pendaftaran Program Jaringan PRIHATIN Penebusan Subsidi Pelan Peranti Program Jaringan PRIHATIN 2GB Data Percuma Sejam Sehari Program Jaringan PRIHATIN Penamatan Program Jaringan PRIHATIN Kempen Pulangan Tunai U Mobile Untuk Tambah Nilai Selama Setahun Jaringan PRIHATIN Programme - Online Store RM0.99 Device Offer UMerdeka Prepaid Campaign 2021 Samsung Galaxy Z series Pre-Order Gimme Gimme Cash GoPayz GILER FLASH DEAL MALAYSIA DAY CAMPAIGN MCMC PERANTI KM40 MCMC FREE 1GB PER DAY Prepaid to Postpaid Value+ Android Promotion UM Biz Value+ Android Promotion FREE WiFi at PPR BIRTHDAY CAMPAIGN UM Biz Value+ iPhone Promotion CreditSOS Raya Campaign Jaringan Prihatin Programme Eligibility Jaringan Prihatin Programme - Redemption of Plan Subsidy Jaringan Prihatin Programme - Redemption of Device Package Subsidy Jaringan Prihatin Programme - Switching Plans & Providers Jaringan Prihatin Programme Termination Penebusan Subsidi Pelan Program Jaringan PRIHATIN Naik taraf Pelan & Bertukar ke U Mobile U Mobile’s Cash Back ForaYear Reload Campaign Stor Online Program Jaringan PRIHATIN PREPAID HIGH AND LOW RELOAD CAMPAIGN CreditSOS Merdeka Campaign MERDEKA GIFT SET CAMPAIGN UMerdeka Postpaid Campaign 2021 GILER FLASH DEAL 10.10 CAMPAIGN RM0 Phones
मेरो UMI स्वतः नवीकरण हुन असफल भयो भने के हुन्छ?
खातामा अपर्याप्त ब्यालेन्स भएमा वा खाता निष्क्रिय अवधिमा भएको अवस्थामा सदस्यता स्वतः नवीकरण हुन असफल हुन्छ। प्रणालीले अर्को दिन मात्र सदस्यतालाई फेरि नवीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछ।
मैले मेरो UMI को कोटा ब्यालेन्स र मान्य अवधि कसरी हेर्न सक्छु?
चरण 1 – MyUMobile एप लन्च गर्नुहोस्
चरण2– ‘USAGE BALANCE’ मा स्क्रोल गर्नुहोस्
चरण3– विस्तृत UMI कोटा ब्यालेन्सहरूका लागि माथितिर स्वाइप गर्नुहोस्
*118*3*1*3# डायल गर्नुहोस्
लेखेर 28118 मा पठाउनुहोस्
मैले मान्यता अवधि भित्रमै डाटा छुट नाघेमा के हुन्छ? अतिरिक्त प्रयोगको लागि कुनै शुल्कहरू लाग्छ?
तपाईंले निर्धारित कोटा नाघ्नुभयो भने तपाईंले SMS सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै अतिरिक्त शुल्कहरू लाग्ने छैन। निष्पक्ष उपयोग नीति लागु हुन्छ - तपाईंको उच्च गतिको डाटा पूरा भएपछि तपाईंको गतिलाई कम गरिनेछ।
मैले मलाई निर्धारण गरिएको भ्वाइस कलहरूको मिनेट नाघेमा के हुन्छ? म अझै पनि कल गर्न सक्षम हुन्छु?
तपाईंका बाहिर जाने कलहरूमा तपाईंको हालको प्रिपेड योजनाको आधारमा शुल्क लगाइनेछ। वैकल्पिक रूपमा, फेरि टक टाइम सुरु गर्न तपाईंले आफ्नो असीमित मोबाइल इन्टरनेट योजना नवीकरण गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
मैले मेरो नि:शुल्क SMS (UMI 38 मात्र) नाघेमा के हुन्छ? म अझै पनि सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुन्छु?
तपाईंको SMS मा U Mobile को मानक प्रिपेड ट्यारिफमा शुल्क लगाइनेछ।
मैले मेरो UMI लाई तुरुन्तै कसरी निष्क्रिय गर्न सक्छु जसकारण मैले अन्य डाटा योजनाहरू खरिद गर्न सक्छु?
तपाईंको UMI लाई UMB मार्फत *118*3*1*4# डायल गरेर वा SMS मार्फत (“Off UMI 20”, “Off UMI 25”, “Off UMI 30”, “Off UMI 38” वा “Off UMI 50”) लेखेर यसलाई 28118 मा पठाएर निष्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक SMS को RM0.05 लाग्नेछ
मैले यो सदस्यता सेवाको स्वत: नवीकरण रोक्न सक्छु?
तपाईंले UMB मार्फत *118*3*1*5# डायल गरी स्वतः नवीकरण रोक्न सक्नुहुनेछ।
मैले भिन्न UMI योजना खरिद गरें (जस्तै तपाईंसँग हाल UMI 50 छ र UMI 30 खरिद गर्न चाहनुहुन्छ) भने के हुन्छ?
तपाईंको हालको UMI लाई नयाँ UMI द्वारा प्रतिस्थापित गरिनेछ। कुनै पनि प्रयोग नगरिएको कोटा र मिनेटहरूलाई जफत गरिनेछ र नयाँ UMI मा रोल ओभर गरिनेछैन। उदाहरण UMI 30 खरिद गर्दा हालको UMI 50 को प्रयोग नगरिएको कोटा र मिनेटहरूलाई जफत गरिनेछ। तपाईंलाई पछिल्लोपटक खरिद गरिएको UMI को डाटा र मिनेटमा मात्र अधिकारप्राप्त हुनेछ।
मैले निष्क्रिय अवधिमा UMI योजनाहरू खरिद गर्न सक्छु?
होइन, तपाईं निष्क्रिय अवधिमा UMI योजनाहरू खरिद गर्न सक्षम हुनुहुनेछैन।
मेरो UMI योजना निष्क्रिय समयामा पनि स्वतः नवीकरण हुनेछ?
हुँदैन, तपाईंको UMI योजना निष्क्रिय अवधिमा स्वतः नवीकरण हुनेछैन।